1. Ọrụ ahụ dị mfe ma na-azọpụta ọrụ, ọnụego ọdịda dị ala, ikike mbelata siri ike, na nbibi ngwa ngwa ngwa ngwa, karịa 1000 ugboro kwa elekere.
2. Knife ebu ọnọdụ ngwaọrụ, elu na ala mma akpụzi ukpụhọde, dị nnọọ mfe, ezi na ngwa ngwa.
3. da jụụ na obere mkpọtụ mgbe ị na-arụ ọrụ na-eme ka ebe ọrụ dị mma.
4. Ngwaọrụ na-edozi ahụ nwere ike ịnweta ọrịa strok kachasị mma ma mee ka ndụ ọrụ nke ọnwụ na ụlọ ọrụ ọnwụ dịkwuo elu.
5. Enwere usoro ọrụ nchekwa.
• Igwe akụrụngwa na-akpaghị aka na-eji ihe eji eme ihe, nke nwere ike belata ọrụ na ịbawanye arụmọrụ. A na-anabata usoro nke okpukpu abụọ nke cylinder.
• Structure, nweta elu tonnage ọnwụ na-azọpụta oriri ike. Na-adabere na nkenke igwe mpempe akwụkwọ mpịakọta anọ, otu akụkụ ma ọ bụ ihu abụọ.
• Igwe nri na-akpaghị aka na-eme ka arụmọrụ na nchekwa nke akụrụngwa igwe dịkwuo mma, na-eme ka arụmọrụ nke igwe dum dịkwuo elu site na abụọ ruo atọ.
• Akụrụngwa nri akụrụngwa kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ ọnya, ụlọ ọrụ ibu, nhazi akpụkpọ anụ, ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ, ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa, ihe egwuregwu.
• tingcha arụmọrụ nke nnukwu-ọnụ ọgụgụ na-anwụ na elu-anwụ n'ihi na ulo oru, ụlọ, ụgbọala, ụlọ ọrụ, wdg
PUR na-ekpo ọkụ gbazee nrapado laminating igwe TH-101A
2. Erughị ala unwinding ngwaọrụ, ọ dịghị ndọlị, mbenata oru osisi ike.
PUR na-ekpo ọkụ gbazee nrapado laminating igwe TH-101C
1. CNC nkenke n'ichepụta, elu kpọmkwem, ezi nhazi, ezi linearity, na elu arụmọrụ.
2. Ejiri magnet batrị, ịdị ọcha dị elu, enweghị ntụ ntụ ojii, arụmọrụ kwụsiri ike na ndụ ogologo.
3. Aluminium alloy Ọdịdị, na magburu onwe okpomọkụ dissipation arụmọrụ, ezi demagnetization, na ngwa ngwa omume ọsọ.
4. Anụ ọrụ, ọ dịghị vibration, ọ dịghị mmetụta, ọ dịghị mkpọtụ n'okpuru amalite, na-agba ọsọ na braking ọnọdụ.
Aterial: Jiri elu-edu 45 # enweghị nkebi nchara anwụrụ na alloy nchara anwụrụ
Zọ ọkụ: mmanụ na-eme ka ikpo ọkụ, mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
Nhazi: uzo dị n'ime ya na nnukwu ụzọ isi na-agba ọsọ ma ọ bụ usoro jaket
Hot gbazee mama mama Laminating Machine Na Ce Asambodo, Pur Hot gbazee gluu Nonwoven Laminating Machine, Hot gbazee gluu Ngwa, Automatic Hot gbazee mama mama Laminating Machine, Hot gbazee mama mama Laminating Machine N'ihi Uwe, Pur Hot gbazee nrapado Laminating Machine,